IMVULA KUNYE NEENGOZI ZAYO - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Imvula kunye neengozi zayo
Nantsi isikhokelo sethu kwindlu yokuhlambela yokuqubha iintloko kunye neengozi kubandakanya neempawu zabo, ukugqitywa okuthandwayo kunye nendlela ephezulu yokuxhoma. Ukuba uyayitshintsha intloko yeshawari kwishower yakho, unethuba lokutshintsha okanye ukuphucula uhlobo lwentloko yeshawari.
Nangona kukho iintlobo ezininzi zeentloko zokuhlambela iintloko kunye nokuyila, intloko yeshawa yemvula yenza ukhetho olugqwesileyo.
Esi sikhokelo siza kuxubusha ngeempawu zentloko yeshawa yemvula kunye nezinto onokukhetha kuzo kunye nokulunga kunye nokuchana kwazo ukukunceda uthenge eyona ntloko yemvula ishawa yakho ishawa yangasese .
eyakhe camo iringi yomtshato iseti
Yintoni iNtloko yokuhlamba imvula
Imvula yeShower yeNtloko
Ivula iNtloko yemvula
Uyicoca njani iNtloko yokuhlamba imvula
Ifanele ukuba ibe phezulu kangakanani iNtloko yeShower yeNtloko?
Ngubani owangenisa intloko yeshawari?
Intloko yeshawari eqhelekileyo efumaneka emakhayeni ziintloko zeeshawari ezizinzileyo kwaye zinyuselwe eludongeni lweshawari. Ziindlela ezingafunekiyo eziphakathi kwe 5-intshi okanye ngaphantsi.
Iintloko zeshawari yemvula nazo ziintloko zeeshawari ezingatshintshiyo kodwa zinkulu kakhulu kunentloko yeshawari emiselweyo. Zisukela kwii-intshi ezi-6 kwaye zinkulu kwaye zibonelela ngakumbi ngesambatho kwishawari enemingxunya engaphezulu.
Njengoko igama lisitsho, iintloko zeeshawari zemvula zenzelwe ukulinganisa ishawa emanzi egubungele umzimba wonke.
Ekuqaleni yayenzelwe ukunyuka eluphahleni, iintloko zeshawari yemvula ngoku ziza zinokuphakanyiswa eludongeni ukunqanda ukuqhubekeka ngemibhobho ukuya eluphahleni ngaphezulu kwesitali setafile. Iintloko zeshawari yemvula zibonelela ngamava anqabileyo afana ne-spa kwishawari yakho yasekhaya.
Emva kosuku olude lomsebenzi, akukho nto ithoba isidima njengeeshawari ende, eshushu. Iintloko zeshawari yemvula zenza ukuba ishawa ihlambe ngakumbi kwaye ihlaziye. Fumanisa izinto ezininzi eziluncedo xa ufaka intloko yeshawa.
Gcwalisa ukhuseleko lomzimba -Ubonelela ngakumbi ngokugubungela amanzi ngaphandle kwesidingo sokuhlengahlengisa intloko yeshawari
Easy ukucoca -Imilomo yemilomo ye-rabha ichasene ne-clog kwaye inokucinywa ukucoca.
Kulula ukuyifaka -Okulula njengokutshintsha indawo yentloko yeshawari esemgangathweni (uhlobo oluxhonywe eludongeni)
I-Spa-ifana - Inika amava okuma kwishawa eshushu yemvula
Ukuphumla kokuhamba kwamanzi -Amanzi ahamba kakuhle kwaye kakuhle
Ukuhlamba ngaphandle kwezandla
Iimpawu eziphambili -Yiza nezinto ezininzi onokukhetha kuzo kunye neempawu
Isitayile kunye nomtsalane
Iimpawu zokonga amanzi Uninzi lunezicwangciso ezinokuhlengahlengiswa ukulawula ukuhamba kwamanzi.
Iintloko zeeshawa zemvula ngokukhawuleza zithatha indawo ephezulu yeentloko zeeshawari ezithengwe ngabanini bamakhaya kwaye lukhetho oluthandwayo. Kukho ezinye izinto ezisezantsi, nangona kunjalo.
Iindleko -Ingabiza ngaphezu kwentloko yeshawari yesiqhelo
Ifuna isilingi ephezulu -Ufanele ube nesithuba esaneleyo sokwanela umntu omde
Ngaba noxinzelelo lwamanzi asezantsi -Uxinzelelo olunokubakho lwamanzi asezantsi olusekwe kuyilo kunye nohlobo
Kufuneka ifakwe kwi-angle ye-90 degree -Oku kunokubenza kube nzima ukuyifaka kwigumbi lokurenta okanye kwigumbi lokuhlambela elisezantsi kophahla
Jonga le 12 head intloko yeshawari yemvula eAmazon.
Intloko yeshawa yemvula ibandakanya amanqaku ukuze ahlangane nomntu wonke. Ezona mpawu ziphambili zibandakanya ulungelelwaniso loxinzelelo lwamanzi oludala umsinga wamanzi opholileyo kwindawo enkulu esekwe kubungakanani bentloko yeshawa yemvula.
Imibhobho emininzi yokutshiza ivumela amanzi ukuba ahambe okanye awe endaweni yokutshiza njengentloko yeshawari esemgangathweni. Apha ngezantsi kukho izinto ezinokwenziwa ngokwezifiso ezikhoyo xa uthenga intloko yeshawa.
Imvula yokuhlambela iNtloko ngeWand ephathwayo -Ukuba usafuna iwand ephathwa ngesandla kwishower yakho, khetha imodeli yentloko yeshawari yemvula enewander ephathwayo. Jonga uyilo oluvumela ukuba usebenzise zombini ishawa yentloko kunye ne-handheld ngaxeshanye.
Izibane ezikhanyisiweyo -Ukufaka isibane se-LED sokukhanya semvula kwishawari yakho kongeza umlinganiso omtsha kumava eshawa. Izinketho zibandakanya imibala emininzi, kunye nokukhetha ukutshintsha imibala, kunye nokuphela kombala. Ziza kwisimo esisisikwere, uxande, okanye isangqa. Iintloko zeeshawari ezikhanyayo zemvula ziqhutywa ngamandla oxinzelelo lwamanzi kuphela; akukho bhetri okanye umbane uyafuneka.
Yophahla Onyuswe Iintloko zeeshawari zemvula zixhonywe kuphahla lweshower. Nangona kunjalo, imibhobho yamanzi iya kufuneka iqhutywe ukuzisa amanzi kwintloko yeshawa yemvula. Ukuphakama kwesilingi esitalini seshawari kubalulekile. Imilinganiselo iyafuneka ukuvumela oyena mntu mde usebenzisa ishawa ukuba abe ne-intshi ezili-12 zokucoca kwintloko yeshawari yemvula.
Inkulu kakhulu - Iintloko zeshawari zemvula ezinkulu ezongezelelekileyo zigubungela indawo engaphezulu kwishawari. Zihlala zibonelela kufutshane kuxinzelelo lwamanzi olufanayo kwaye zigubungele wonke umzimba ngaxeshanye, ke akukho kuhamba ngokuhlamba okanye ukuhlamba. Oku kuhle kubantu abakhubazekileyo abafuna ukuhlala ngexesha lokuhlamba kwabo.
Uxinzelelo oluphezulu -Iintloko zeeshawari zemvula azithethi ukutshiza amanzi ngoxinzelelo oluphezulu. Bavumela amanzi ukuba awe kancinci.
Intloko yeshawari enkulu yemvula inokunciphisa uxinzelelo lwamanzi kancinci, kodwa iintloko zeshower zoxinzelelo oluphezulu zenzelwe ukubonelela ngoxinzelelo lwamanzi ngakumbi.
Uxinzelelo lwamanzi lubonakaliswa njengegaloni ngomzuzu (GPM). Iintloko zokuhlamba zihlala ziqhutywa nge-1.5 GPM, kwaye ezinye, njengentloko yeshawa yemvula, zibaleka kwi-2.5 GPM. Abavelisi abazenzi iintloko zeshawari yemvula okanye iintloko zeshawari ezikhupha ngaphezulu kwe-2.5 GPM.
Ulwandiso lwengalo -Imvula yentloko yeshawa yokwandiswa kweengalo ivumela ukubekwa ngcono kwentloko yeshawa, kwaye ezinye iintlobo zivumela i-angle ukuba ilungelelaniswe. Esona sizathu sokusebenzisa ingalo yokwandiswa kweshawari yemvula kukuxhoma intloko ixesha elide okanye ukuyivumela ukuba iphume kude nodonga.
Intloko yokuHlamba iMvula emibini - Inkqubo yentloko yeshawari yemvula ebini inikezela iintloko ezimbini ezahlukileyo zemvula. Banokuba sisitayile esifanayo, imilo, kunye nobungakanani okanye ezahlukeneyo ngobukhulu okanye umsebenzi. Nganye ilawulwa ngokwahlukeneyo.
Olu seto lufuna ubeko olukhulu lokuhlambela ukulungiselela indawo ebanzi uyilo lokuhlamba ngaphakathi .
Jonga le ntloko yeshawari yemvula yentloko eAmazon.
Ukugqitywa okwahlukileyo kuthetha amaxabiso ahlukeneyo, isitayile, ukuhlala ixesha elide, kunye noyilo. Ukugqitywa kokukhetha kuxhomekeke kuyilo lwangaphakathi lokuhlambela kunye neshawari.
I-Chrome: I-Chrome sisiphelo esingapheliyo. Ayithethi ukuba intloko yeshawari yemvula yenziwe nge-chrome kodwa inethoni efanayo, ikhanya, kwaye jonga. I-Chrome ihamba ngeendlela ezininzi zokuhombisa kwaye yeyona nto iphantsi ebiza kakhulu kwintloko yemvula yeshawari.
Brass olukhazimlisiweyo -Esi siphelo sentloko yeshawa yemvula yethoni yegolide yinto ephindaphindayo yobhedu kwaye sisiphelo esomeleleyo. I-Brass ephosiweyo yayithandwa kwii-80s kunye nee-90s kodwa ayisetyenziswa rhoqo namhlanje. Ithoni yegolide inesibindi, ke qiniseka ukuba iyahambelana nencoko yegumbi lokuhlambela.
I-Nickel ebrashiweyo -Umdlalo ogqityiweyo ongwevu-mbala kunye nombala, i-nickel ebrashiya iya ithandwa. Isebenza phantse naluphi na uhlobo lwemihlobiso kwaye iyayichasa indawo enamanzi.
Iintloko zeshawari yemvula ebaleka amanzi anzima zinokwakhiwa kwezimbiwa okanye ezinye izinto ezakhiweyo eziya kuthintela ukuhamba kwamanzi. Kubalulekile ukucoca intloko yeshawa rhoqo. Ukulinda ide ivalwe yonke imingxunya yamanzi kunokukhokelela kumonakalo osisigxina.
Ukuba intloko yeshawa yakho yemvula ine-screw-on uqhagamshelo, uyijijise ukuze ukhulule kwaye ususe intloko yeshawa. Beka intloko kwisitya seviniga emhlophe ecoliweyo.
Qinisekisa ukuba igubungela intloko yonke. Thela kwiipunipoli ezi-2 ze-baking soda kwaye uyiyeke ibe fizz. Shiya intloko iyure. Susa intloko yeshawari yemvula, vula ngamanzi, kwaye usebenzise ibrashi yamazinyo endala ukuhlikihla nayiphi na into eseleyo yezimbiwa.
Namathisela intloko yeshawa yemvula kwaye uqhube amanzi ukukhupha nasiphi na isisombululo seviniga.
Sebenzisa le ndlela ukuba iintloko zakho zeshawari zemvula ezingacimi. Yongeza iviniga emhlophe, isiqingatha ukuya phezulu, kwingxowa enkulu yeplastiki okanye kwingxowa yenkunkuma, kuxhomekeke kubukhulu bentloko yakho yeshawari.
Thela kwiipunipoyi ezi-2 ze-baking soda kwaye uyityibilikise ngaphezulu kwentloko yeshawa. Yibophe ijikeleze ingalo ephezulu ngentambo okanye iqhina elikhulu lokujija kwaye uqiniseke ukuba liqinile. Yilungiselele i-tie ngaphambi kokuba wenze umxube.
Intloko yeshawa yemvula kufuneka ifakwe. Vumela ukuba ixhomeke iyure uze uyikhuphe. Vula amanzi ukuya kwintloko yeshawari yemvula ukuze uhlambe isisombululo seviniga. Ukuba kukho intsalela eseleyo, sebenzisa ibrashi yamazinyo endala ukucoca ulwakhiwo lwezimbiwa oluseleyo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, intloko yeshawa yemvula kufuneka ubuncinci ibe zii-intshi ezili-12 ukusuka phezulu kwintloko yomsebenzisi omde.
Ukufaka intloko yeshawa yemvula engama-intshi angama-84 ukusuka kumgangatho wokuhlamba kuvumela phantse zonke iindawo eziphakamileyo. Akukho mntu ufuna ukuba nentloko yakhe ayihlikihle entlokweni yeshawari yemvula.
Umgangatho womzi mveliso wokuphakama kwentloko yeshawa zii-intshi ezingama-80 ukusuka phantsi. Intloko yeshawa yemvula yeyona ilungileyo kubantu abade xa bebekwe kubude obufanelekileyo, kwaye ingalo eyandisiweyo isetyenziselwa ukunyusa udonga ukwenza ukulunga okufanelekileyo.
AmaGrike amandulo kunye namaRoma ayekhathalele ucoceko lomntu kwaye aguquka ukusuka ekumeni phantsi kwempompo yendalo ukuya ekuphuhliseni iindlela zokuhlamba ezenzelwe kuphela iiklasi ezikhethekileyo.
Ngo-1767, umenzi wezitovu waseLondon, uWilliam Feetham, unelungelo lobunikazi lokuhlamba. Ukuyila kwakhe okungekho krwada kunempompo eyondla amanzi kwisitya phezulu kwezixhobo. Umsebenzisi wayeza kuma phantsi kwesitya kwaye atsale ikhonkco elikhutshwa ngamanzi abandayo.
Ngo-1810, umqambi ongaziwayo kunye nosomashishini wadala isiNgesi Regency Shower, uyilo olusondele kakhulu kwishawa yanamhlanje. Ngokongezwa kwemibhobho efakwe kwisitya, amanzi ayephuma kwimingxunya esezantsi kwesitya kwaye avunyelwe kwimvula yamanzi ashushu.
Uyilo luhambe ngeendlela ezininzi, kubandakanya nemilomo ehlengahlengiswayo kunye neentloko zeeshawari, ezifanayo nezo sisebenzisa namhlanje.
Ixabisa malini ilayisensi yomtshato e-ohio
Uphethe ulwazi kwesi sikhokelo malunga neproses yentloko yeshawa kunye nobubi, ngoku ungathenga uhlobo, isimbo, kunye nesayizi yentloko yeshawari ukwenza indawo yokuphumla enjengeyokuhlambela enjengeyasekhaya.
Sazise ukuba ucinga ntoni kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi. Ukufumana umxholo onxulumene noko cofa inqaku lethu malunga izimvo zebhentshi yokuhlamba .
Ndikuthanda kangakanani iikowuti
iingoma zokucula emtshatweni
Ungazithenga phi iilokhwe zomtshato erock
utshata njani eKentucky
ucoca umsesane ekhaya
iintyatyambo zomtshato kuhlahlo-lwabiwo mali